किन पिटाइँदै छ तरलता संकुचनको हल्ला ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले उत्पन्न तरलता संकुचनलाई कृत्रिमताको संज्ञा दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले भने तरलता रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । आखिर, राष्ट्र बैंक र बैंकर्सहरूबीच किन तरलता संकुचनबारे एकै मत देखिँदैन ?
तर, अहिले उत्पन्न तरलता संकुचनले सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै असर पु¥याउनेबारे बैंकर्सहरूले बताउँदै आए पनि त्यसभित्र छिपेको रहस्य भने अर्कै रहेको बताइन्छ । तरलता संकुचनको हल्ला पिटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको दायरा ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना र दाउअनुरूप यस्तो कुरा बाहिर आइरहेको बुझिएको छ । किनकि, विगत पाँच महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहको ८० प्रतिशत कटाइसकेका छन् ।
बैंकर्सहरूको आसय कर्जाको दायरा ८५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने रहे पनि राष्ट्र बैंकले भने त्यसलाई लागू गर्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको जनाइन्छ । राष्ट्र बैंक निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्न नपाइने नियमबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ । कर्जाको दायरा विस्तार गर्नेबित्तिकै झनै वित्तीय संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
अहिले तरलता संकुचन हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै जिम्मेवार रहेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको आकारअनुसार लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध तरिकाले लगानी गरेपछि अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो । वर्ष दिनभरि लगानी गर्नुपर्ने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो पाँच महिनाभित्र लगानी गरेपछि समस्या देखिएको हो ।
पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो भने लगानीमा ९ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । निक्षेप र लगानीमा ५ प्रतिशतले रिक्तता रहेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । यस्तो समस्या उत्पन्न भएपछि बैंकहरूले निक्षेप संकलन वृद्धि गर्नेतिर कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर, निक्षेप संकलन हुने रेमिट्यान्सबाट आएको रकमबाट हो । पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको रकम आउने क्रम घटेपछि निक्षेप संकलनमा कमी आएको बताइन्छ ।